आमाको कोभिड नतिजा नेगेटिभ, नवजात शिशुको पोजेटिभ भएपछि डाक्टर पनि अचम्मित – Sapana Sanjal
May 30, 2021 120
सामान्यतया संक्रमित आमावाट जन्मिएका बच्चाहरुमा संक्रमण देखिदैन । तर भारतको बनारसमा भने फरक घटना भएको छ । रिपोर्ट नेगेटिभ रहेकी महिलाले जन्माएको बच्चा संक्रमित भएको देखिएको छ । संक्रमण नभएकी महिलाबाट जन्मिएका शिशुमा संक्रमण देखिए पछि चिकित्सक अचम्ममा परेका छन् ।
Prevप्रहरीको गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि सबै चकित !!
Nextजब पाइलटले एयर होस्टेसलाइ कपडा खोलेर आफ्नो …. देखाउन थाले